ဗုဒ္ဓသာသနရံသီ (ဂျာမနီ) အသင်း: September 2012
အသင်းအမှုဆောင် ဦးလှစိုး + ဒေါ်သိန်းမြင့် မိသားစုတို့မှ မွေးနေ့အလှူရှင် ဒေါ်သိန်းမြင့် ရဲ့ (၆၉) နှစ်ပြည့် မြောက် မွေးနေ့အလှူပွဲကို ဗုဒ္ဓသာသနရံသီ အသင်းတိုက် ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းမှာပဲ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါ တယ်။ နံနက် ၁၁း၁၅ နာရီတွင် ဘုရားအမှူးထား၍ သံဃာ့ဂုဏ်ကို အာရုံပြုကာ နေ့ဆွမ်းနဲ့ အချိုပွဲများ ဆက်ကပ် လှူဒါန်းခြင်း၊ ဧည့်ပရိသတ်များအားလည်း ကျွေးဧည့်ခံခြင်းတို့ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီနောက် လှူဒါန်းမှု အစုစုတို့အတွက် သီလဆောက်တည်၍ ပရိတ်တရားတော်များကို နာယူကြကာ ရေစက်သွန်းချ အမျှအတန်းများ ပေးဝေခဲ့ကြပါတယ်။
မွေးနေ့အလှူရှင် မိသားစုနဲ့ တကွ ဧည့်ပရိသတ်များ ရွှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေ။
ကိုမင်းမင်းနှင့် ကိုကျော်ခိုင် + မမြ၀တ်ရည် မိသားစုတို့ရဲ့ နေ့ဆွမ်းအလှူ
ကိုမင်းမင်းနှင့် ကိုကျော်ခိုင်+ မမြ၀တ်ရည် မိသားစုတို့မှ ၂၃. ၀၉. ၂၀၁၂ ရက်၊ တနင်္ဂနွေနေ့က နေအိမ်မှာပဲ နေ့ဆွမ်းဆက်ကပ်ခဲ့ကြပါတယ်။ နေ့ဆွမ်းမကပ်လှူခင် သီလဆောက်တည်ခြင်း၊ ပရိတ်တရားတော်များကို နာယူခြင်းနှင့် ရေစက်သွန်းချ အမျှအတန်း ပေးဝေခြင်းတို့ကို ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီနောက် နေ့ဆွမ်း ဆက်ကပ် လှူဒါန်းခဲ့ကြပါတယ်။
အလှူရှင်မိသားစု နဲ့ ဧည့်ပရိသတ်များ ကျန်းမာ၊ ချမ်းကြပါစေ။
သဒ္ဓါတရား ထက်သန်စွာဖြင့် အလှူငွေများ ပါဝင်လှူဒါန်းလျက် ရှိကြပါသည်။ သို့ပါ၍ ထေရ၀ါဒ ဗုဒ္ဓသာသနာတော် ဥရောပတွင် ဂျာမဏီနိုင်ငံ၊ ဖရန့်ဖို့မြို့ရှိ ဗုဒ္ဓသာသနရံသီ မြန်မာ ဘုန်တော်ကြီးကျောင်းတော် ၀ယ်ယူနိုင်ရေးအတွက် အလှူရှင်များမှ အရှည်ခန့်၍တည်တံ့စေနိုင်ရေးအတွက် စေတနာ သဒ္ဓါတရား ထက်သန်စွာဖြင့် ပါဝင်လှူဒါန်းကြပါရန် လေးစားစွာ နှိုးဆော်တိုက်တွန်းအပ်ပါသည်။
ဆက်သွယ်လှူဒါန်းနိုင်သည့် ဖုန်းနံပါတ်များ -
ဥက္ကဋ္ဌဆရာတော် ဦးဥတ္တရ (လန်ဒန်) ဖုန်း - 0044 (0)208 205 0221
ဦးမောင်မောင်ဝင်း - ဖုန်း - 0049 (0) 15202330121
ဦးသိန်းယု - ဖုန်း - 0049 (0) 15202325633
ဦးလှမောင်သန်း - ဖုန်း - 0049 (0) 01728860141
ဦးလှစိုး - ဖုန်း - 0049 (0) 1626818478
မတည်လှူဒါန်းထားကြသည့် အလှူရှင်များ စာရင်း
ဒေါက်တာ အေးနိုင် + ဒေါ်သန်းသန်းချို မိသားစု
ဦးသန်းထွဋ် + အကယ်ဒမီ ဒေါ်ဝါ၀ါဝင်းရွှေ မိသားစု
ဦးတင်မောင် + ဒေါ်လှလှ (သား) မောင်သန့်ဇင်ထွန်း
ဦးတင်ထွန်း + ဒေါ်ရီရီသန့် မိသားစု
ဦးအောင်ကျော် + ဒေါ်ခင်မေကြည် မိသားစု
ဦးကျော်ကျော်သန့် + ဒေါ်မြင့်မြင့် မိသားစု
(တူ) ကိုမင်းသုခ (သမီး) မချယ်ရီ၊ မဒေလီယာ၊ မောင်သီဟ နှင့် မဒေစီ
ဆရာတော် ဦးတိလောက (စင်္ကာပူ) မှ ပြန်လှူဒါန်းငွေ
ဦးမောင်မောင်ဝင်း+ဒေါ်မြစမ်းအေး (သား) မောင်သူရအောင် မိသားစု
ဦးကြည်ဝင်း + ဒေါ်စန်းညွန့် (ယုဇနပလာဇာ) မိသားစု
ဦးလှစိုး + ဒေါ်သိန်းမြင့် မိသားစု
မိခင်ကြီး ဒေါ်ရင်ရင်မြင့် အတွက်ရည်စူး၍ ကိုတိုး+မအေး (သား)မောင်ခန့်ဇော်အောင် တို့မှ သင်္ကန်းတစ်စုံလှူ
ဖခင်ကြီး ဦးမြင့်ထွန်း အတွက် ရည်စူး၍ (သား) ကိုမောင်မောင်စိုး မှ သင်္ကန်းတစ်စုံလှူ
ဦးလှသိန်း + ဒေါက်တာ ဒေါ်ခင်လေး
ဦးချစ်ခိုင် + ဒေါ်မြင့်
ဦးတင်ဝင်း + ဒေါ်စန်းစန်းရှိန်
ဦးကိုဆန်း + ဒေါ်တင်တင်ထွေး
ဦးအောင်ပြည့်ထွန်း + ဒေါ်မျိုးမြတ်စန္ဒီ၊ ကိုသူရိန်ထွန်း + မနီနီမော် (သား) မောင်သီဟလင်းထွန်း
ကိုကျော်ဇေယျ + မကြည်ကြည် မိသားစု